tadoº Smart AC Control, ugu dambeyntiina ku xakamee qaboojiyaha HomeKit | Wararka IPhone
Mid ka mid ah cunsurrada guri kasta oo inta badan ka faa'iideysan kara faa'iidooyinka is-dhexgalka ee masraxa demoqsiga waa, shaki la'aan, qaboojiye. Isticmaalka amarrada codka, jadwalka joogtada ah iyo bay'adaha, faa'iidooyinka isticmaalka barnaamijyada moobiilka, kontoroolka fog iyo iwm dheer oo aad uga fog shaqooyinka ay qabsan karaan burooyinka kontoroolka caadiga ah.
tadoº waxay muddo dheer dooratay xakamaynta noocan ah ee nidaamyada qaboojiyaha, iyo nooca cusub ee xakamayntaada Smart AC (V3 +) hadda sidoo kale wuxuu leeyahay iswaafajin la filayo oo la leh HomeKit. Waxaan ku tijaabinay nidaamkan xakamaynta cusub hawo qaboojiyeyaasha oo halkan hoose ayaan ku tusi doonaa.
2 Rakibaadda iyo qaabeynta
Waa qalab yar, fudud oo aad u yar oo aad ku ridi karto meel kasta oo guriga ka mid ah. Miisaankiisu hooseeyo (73 garaam) waxay ka dhigan tahay inaad darbiga dul dhigto uma baahnid inaad qodato, iyo laba xabag oo dhejis ah oo ku jira sanduuqa waad ku qaban kartaa dusha kasta oo siman adiga oo aan dhaawicin. Waxay leedahay laba jibbaaran (10 × 10 cm) naqshad cadaan ah, oo dusha sare ku jebineysa daaqadda ugu yar ee loo isticmaalo xakamaynta infrared kana sii gudubto dhinac ilaa dhinac.
Shaashadu guud ahaan way xidhan tahay, waxayna ka kooban tahay laydhadh cad oo ifiya marka aad taabato dusha hore, taas oo kuu oggolaanaysa inaad xakamayso xulashooyinka adigoo taabanaya, oo aan lahayn badhanno muuqaal ah Ma lahan nooc batteri ah, sidaa darteed waa in had iyo jeer lagu xidho meel god ah iyadoo la isticmaalayo fiilada microUSB (1,85 mitir) iyo adabtarada adabtarada ayaa kujira sanduuqa. Haddii fiilada laga saaro, waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo ah microUSB cable leh dhererka aad u baahan tahay.
Xiriirinta waxaa lagu sameeyaa shabakada WiFi ee guriga, iyadoo la jaan qaadi karta shabakadaha 2,4GHz b / g / n. Xidhiidhkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhigatid meel kasta oo guriga ah oo leh caymiska WiFi, iyada oo aan loo baahnayn buundooyinka nooc kasta ha ahaadeene. Shuruudda keliya ee aad u baahan tahay waa inaad aragti toos ah ka hesho mashiinka qaboojiyaha si amarrada ay soo saaraan infrared ay u yimaadaan dhibaato la'aan. Meelkasta oo ay maamusho xakamayntaada caadiga ah, waxaad dhigi kartaa tadoº Smart AC V3 + kantaroolaha.
Iswaafajinta HomeKit waa midka aan ku falanqeyneyno barteena, laakiin ma iloobi karno taas sidoo kale waxay taageertaa IFTTT, Kaaliyaha Google iyo Amazon Alexa. Iyada oo tadoº dhammaan aaladaha otomatiga guryaha lagu daro, marka lagu daro codsigeeda loo heli karo macruufka iyo Android. Noocyada qaarkood ayaa kugu qasbaya inaad doorato, tadoº ayaa gabi ahaanba sax ah adiga oo ku siinaya dhammaan xulashooyinka aad heli karto.
Fiidiyowga dusha sare ee maqaalka waxaad ku arki kartaa dhammaan hannaanka qaabeynta oo ay ku jiraan isku xirka kontoroolka, isaga oo siinaya marin u helka shabakadeena WiFi oo ay ku jirto HomeKit. Waxa kale oo aad arki kartaa sida loogu qaabeeyey inay la jaanqaadi karto mashiinka hawadeena. Iswaafajinta waa mid aad u weyn, oo leh liis dheer oo ka mid ah sameynta iyo moodellada iswaafajiya, laakiin haddii aad nasiibdarro ku filan tahay in mashiinkaagu uusan la jaanqaadi karin, waxaad mar walba bari kartaa tilmaamaha ku saabsan xakamayntaada, geeddi-socod dheer laakiin waxtar leh.
Nidaamka oo dhan waxaa lagu fuliyaa iyadoo la raacayo tilmaamaha faahfaahsan ee arjiga wax walba waxaad kala soo bixi kartaa bilaash App Store (isku xirka) oo sidoo kale ah midka loo isticmaalo nidaamka xakamaynta kuleylka ee sumadda oo aan sidoo kale ku falanqeynay balooggeena. TNidaamka oo dhan wuxuu ku socdaa Isbaanish, markaa ma jiri doonaan dhibaatada ugu yar si hawadaadu ugu xirnaato Smart AC Control V3 + daqiiqado gudahood.
Codsiga tadoº wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u isticmaasho iPhone-kaaga sidii kontoroolka fog ee caadiga haddii aad rabto. Waxaad haysaa dhammaan kontaroolada aad ku maarayn karto qalabkaaga fog-fog ee caadiga ah, oo ay ku jiraan xawaaraha marawaxadaha, heerkulka, kala doorashada inta u dhaxeysa kuleylka iyo qabowga ... waa waxa ay ku siiso marka laga hadlayo kontaroolada horumarsan, oo ah wax aan kontaroolku ku habboonaan karin.
Barnaamijyo caqli badan oo kala duwan markaad guriga joogto ama markaad ka maqantahay, farqiga u dhexeeya maalmaha ... ikhtiyaarrada ay bixiso tado are dalabku way badan yihiin, waxaana ugu fiican dhammaantood waa inay tahay xakameyn dareen leh oo aan u baahnayn aqoon badan. hawl yar oo hawl socodsiin ah oo ka badan barnaamij kasta oo barnaamij kontoroolha hagidda fog ah. Iyada oo dhammaan nidaamkan xakamaynta way fududahay inaad u maamusho qaboojiyahaaga si hufan, taas oo macnaheedu yahay inaad kaydiso biilasha korantada, taasina marwalba waa war wanaagsan.
La jaanqaadista HomeKit waa mid lagu daray oo in badan oo naga mid ahi ay sugayeen muddo dheer, taasna ugu dambeyntii way timid. Tani waxay ka dhigan tahay inaad codkaaga ku xakameyn karto qaboojiyahaaga, laga soo qaado iPhone-kaaga, iPad-ka, Appel Watch iyo HomePod. Gelitaanka guriga iyo u sheegista Hoygaaga Guriga (HomePod) inaad shido qaboojiyaha inta aad dharka iska beddeleyso hadda waa run., ama ka xakamee heerkulka fadhiga fadhiga adiga oo aan raadin buro kontorool oo had iyo goor luma inta u dhaxeysa barkimooyinka. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa barnaamijka Guriga si aan ugu xakameyno isdhexgalka cusub ee iOS 13 uu na siinayo oo aad ku arki karto sawirada.
Laakiin HomeKit aad ayey uga sii durugsan tahay, oo ku dhexgalka barnaamijka Apple macnaheedu waa suurtagalnimada Abuur jawi ay kujiraan qalabyo kaladuwan oo aan kudhaqaaqi karno sida aan doono, ama otomaatiyada kuwaas oo ay ku jiraan jadwalka, imaanshaha ama ka bixida guriga, iwm. Waxay sidoo kale na siisaa macluumaad ku saabsan heerkulka gurigeenna, had iyo jeer macluumaad faa'iido leh.
Isku-darka xakamaynta hawo-mareenka ee barxad demoqraadi waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu waaweyn sida loo hagaajiyo waxtarka tamarta iyo raaxada gurigaaga, iyo tadoº oo leh Smart AC Control V3 + ayaa sidaas sameysay. Iswaafajinta saddexda aaladood ee guryaha otomaatigga ah (HomeKit, Kaaliyaha Google iyo Amazon Alexa) waa guul, tanna waa inaan ku darnaa codsi aad u macquul ah oo si sahlan loo isticmaali karo oo leh fursado waaweyn. Qiimaheeda sidoo kale waa mid aad u xiiso badan, kaliya € 99,99 € ee Amazon (isku xirka) waad domotized kartaa qaboojiyaha qolkaaga.
Taabasho iyo xakameyn App
Dejinta fudud iyo qaabeynta
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » tadoº Smart AC Control, ugu dambeyntiina ku xakamee qaboojiyaha HomeKit
Wanaagsan, waad ku mahadsan tahay muujinta sida ay u egtahay iyo ula shaqeyso HomeKit (Waxaan u maleynayaa inaad adigu tahay qofkii ugu horreeyay ee sameeya), waxay u egtahay mid wanaagsan